'Échale ganas, mijo' / 'तिम्रा सबै छोरा दिनुहोस्': PART TWO
Samhita Collur मा मार्च 20, 2019 द्वारा लिखित।
के गर्छ 'ट्रान्सन्ड। विकसित। उडान लिनुहोस्। " तपाईलाई मतलब छ?
भाग एक पढ्नुहोस्।
'Ni de aqui, ni de alla' / 'यहाँबाट छैन, न त त्यहाँबाट'
मैले मेरो मेक्सिकन विरासत र संस्कृतिसँग मेरो सम्बन्ध कायम राखें, तर मैले अमेरिकी संस्कृतिलाई बुझ्ने र अनुकूल गर्ने प्रयास पनि गरें। जब मेरो साथीहरू र उनीहरूका परिवारले टेबलको वरिपरि नभई बैठक कोठामा खाना खाइरहेको मैले देखेँ यसले मेरो मनलाई उदास तुल्यायो। मैले जहिले पनि मेरो घनिष्ट साथीहरूलाई मेरो संस्कृतिमा प्रवेश दिन खोज्थें, र तिनीहरूले खुलेआम मलाई तिनीहरूको स्वीकार गरे।
अमेरिकी संस्कृतिमा मेरो आत्मसात यसको सीमासँग आयो। मलाई थाहा थियो म कहिले पनि पूर्ण रुपमा अमेरिकी हुन सक्दिन, न त म चाहन्थें। मैले एउटा "नसोध्नुहोस्, नदेखाउनुहोस्" कोड अनुसरण गरें, मेरा साथीहरूलाई कहिले पनि मेरो अध्यागमन स्थिति बताउँदिन। तिनीहरू जहिले पनि मान्थे कि म कानूनी रूपमा यहाँ आएको हुँ, र कहिलेकाँही, मसँग मेरो ग्रीन कार्ड छ कि भनेर उनीहरूले मलाई ठट्टामा उडाउँथे। मैले जहिले पनि यी कुराकानीहरूलाई बदल्न कोसिस गर्दछु भित्री उत्तरहरू प्रस्तुत गरेर, "हो, मेरो नाम वास्तवमा डेभिड होइन, तर मेरो नक्कली कागजातहरूले तपाई सबैलाई बेवकूफ बनाइरहेको छ!" म तिनीहरूलाई सत्य कुरा गर्न कहिल्यै सहज महसुस गर्दिन।
अर्कोतर्फ, मेरो साथी ल्याटिनोले मलाई "अमेरिकनिकृत मेक्सिकन" भन्ने लेबल लगाए किनभने मेरो अ English्ग्रेजी उच्चारण थोरै भारी भयो, र मैले स्पेनी शब्दहरूसँग संघर्ष गर्न पनि थालें। वास्तवमा, मेरो हल्का छाला टोनको साथ, ल्याटिनो समुदायका धेरै मानिसहरू मानिन्थे कि म अमेरिकामा जन्मेकी हुँ
सपना भित्र दुःस्वप्न
अन्तत: मैले आफ्नै योग्यतामा र कम्तिमा सानो छात्रवृतिको सहयोगमा सामुदायिक कलेजमा भाग लिएँ। मलाई थाहा थियो म संघीय सहायताका लागि आवेदन दिन सक्दिन, र मैले आफ्नो शिक्षण शुल्क भुक्तान गर्न र मेरा बाबुआमालाई सहयोग गर्न केही जागिर खाइरहेको थिएँ। मैले अन्ततः महसुस गरें कि म मेरा सपनाहरू पछ्याउन सक्षम छु र मैले यस देशमा आफ्नो जीवन निर्माण गर्दैछु। जे होस्, सपनाहरु कहिलेकाँही खराब को लागी एक अस्थायी मोड लिन सक्छ। मेरा बाबुआमाले एउटा घर किन्नुभयो, तर अन्ततः २०० 2007 मा आर्थिक स crisis्कटको क्रममा हामीले घर हरायौं।
हामीले हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती सामना गर्नुपरेको थियो जब मेरो बुबालाई गर्मीको गर्मीको दिन बिहान सबेरै ICE ले समात्यो। जुन दिन उनी पक्राऊ परेका थिए अन्तिम चोटि मैले उसलाई व्यक्तिगत रूपमा देखेको थिएँ। आईसीईको तर्क मेरो बुबाको अध्यागमनको शुरुका दिनहरूमा फिर्ता भयो जब उनले एक बाट कपटपूर्ण कानूनी सल्लाह प्राप्त गरे नटारियो। एक परिवार को रूप मा, हामी कानूनी फीस कवर गर्न को लागी एक बाटो खोज्न scrambled। हामी मेरो बुबालाई निर्वासनमा जान दिइरहेका थिएनौं। चाँडै पछि, ICE फेरि एक पटक आयो - यस पटक मेरो जेठो दाइ, मेरी आमा र मेरो लागि। किनभने मेरो कान्छो भाई उस समयमा एक अमेरिकी नागरिक र नाबालिग थियो, मेरी आमालाई पक्राउबाट मुक्त गरियो। तर मेरो दाइ र मसँग त्यस्तो क्षमता छैन।
हामीलाई हिरासतमा राखिएको थियो तर हामी अझै आफ्नो बुबाबाट अलग रह्यौं। मेरो सपनाहरु र अमेरिका मा बस्ने महत्वाकांक्षाहरु चाँडै नै नजरबन्दमा गर्दा मरे। हाम्रो बुबाले हाम्रो हिरासतको खबर सुने पछि स्वदेशमै निर्वासनमा पठाइयो। ऊ विनाश भएको थियो र हाम्रो वर्तमान अवस्थाको लागि जिम्मेवार महसुस गरेको थियो। मैले अन्ततः मेरा नजिकका साथीहरूलाई लूपमा ल्याउने निर्णय गरें र उनीहरूमा मेरो अवस्था स्वीकार गरे। उनीहरूले अपेक्षा गरे जस्तै धेरै छक्क परे, तर म उनीहरूको समझ र समर्थनका लागि धेरै भाग्यशाली थिए। मेरो बुबालाई निर्वासन गरिएको एक हप्ता पछि, मेरो भाइ र म अन्ततः जमानतमा जान सक्षम भयौं।
त्यसपछिका वर्षहरूमा चलिरहेको अदालतका सुनुवाइहरू, जुन म विश्वास गर्दछु त्यो टुक्रिएको इमिग्रेशन प्रणाली हो, र निरन्तर अनुगमन भइरहेको छ। अघि, म जहिले पनि मेरो सीमितता बुझ्दछु र विश्वास गर्दछु कि अध्यागमन सुधार हाम्रो बचत अनुग्रह हुनेछ। यद्यपि कार्यवाहीको क्रममा मैले मेरो भविष्यको बारेमा कम महसुस गर्न थालें, विशेष गरी जब मेरो वकिलले मलाई भने कि मेरो उत्तम रणनीति मेरो लागि एउटा अमेरिकी नागरिकसँग विवाह गर्नु वा अध्यागमन सुधारको लागि पर्खनु हो। तर यी सबैको लागि चाँदीको अस्तर थियो। जब हामी हटाउने कार्यको बिरूद्ध लडिरहेका थियौं, हामी वास्तवमै अस्थायी कार्य प्राधिकरणको लागि आवेदन दिन सक्षम भयौं। हामी यसो गर्न सक्षम भएका छौं किनभने केही परिस्थितिहरूमा, अध्यागमन अधिकारीहरूले निर्वासन प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अस्थायी कार्य प्राधिकरणको लागि आवेदन दिन अनुमति दिनेछ।
पुन: जागृत हुनु अघि बलिदान
मेरो काम आधिकारिकता सुरक्षित गरे पछि, म भाग्यशाली थिएँ जब म ल्याटिनो समुदायको सेवाका लागि चिनिएका गैर-नाफामुखी संस्था, कोमिनिडेस ल्याटिनस युनिडास एन् सेरसियो (सीएलयूईएस) मा काममा लिइएको थियो। CLUES 'मिशन र मानहरू ती बाबुहरूसँग मिले जुन मेरो बुबाले म भित्र राख्नु भएको थियो। धेरै टाढाबाट पनि, मेरो बुबाले मलाई कडा परिश्रम गरिरहन प्रोत्साहित गरिरहनुभयो, कडा परिश्रम र बलिदानको सँधै प्रतिफल दिइनेछ भन्ने आश्वासन दिँदै। उनले मलाई मेरो प्लेटफर्मलाई सेवा प्रदायकको रूपमा सेवा गर्नका लागि मेरा सहकर्मी ल्याटिनो समुदाय र ठूलो आप्रवासी समुदाय सहित सेवा गर्नका लागि प्रोत्साहित गरे।
२०१२ मा DACA शुरू भएपछि, म फेरि एकपल्ट सपना देख्न सक्षम भएँ। म एक्लै लडिरहेको थिएँ। म अब त्यस्तै स्थितिमा बस्ने मेरा सँगी सपनाहरूसँगसँगै लडिरहेको थिएँ। भविष्यको लागि मेरो आशावाद फिर्ता भयो। म विश्वस्त थिए कि यदि मलाई गोली हानियो भने, मेरो परिवार र मेरो समुदायले यस्तै परिस्थिति चाँडै पछ्याउने छ। मेरो कान्छी, आरक्षित स्वयंको तुलनामा, म बोल्न नसक्नेहरूको लागि आवाज भएँ। म कहिल्यै राजनीतिमा थिइनँ, तर मैले बुझें कि आफू र आफ्नो समुदायको लागि एक प्रभावशाली वकिल हुनको लागि, मैले आफूलाई नीति र राजनीतिमा ज्ञानको साथ प्रयोग गर्नु पर्छ। मैले वास्तवमा हामी को हौं भन्ने बारे अस्पष्ट ज्ञान भएका मानिसहरूलाई र यस देशका लागि हामीले प्रदान गर्ने योगदानलाई शिक्षित गर्न कुनै अवसर लिएँ।
हामी जहिले पनि मेरो बुबालाई घर फर्काउँथे उहाँ बिरामी हुन थाल्नुभयो, र पछि उनलाई मल्टिपल मायलोमा पत्ता लाग्यो। उनको उपचार भइरहेको बेलामा हामीले उनलाई सम्भव भएसम्म समर्थन गर्न जारी राख्यौं। मेरो बुबा एक धेरै गर्व मानिस थियो। यो एक विशेष गुण हो जुन म पनि बोक्दछु। ऊ हामीले उसको चिन्ता गरेको चाहँदैन थियो, र ऊ जहिले पनि 'स्वस्थ छ' भन्छु। तर हामी यस अनुहार मार्फत देख्न सक्छौं। उसलाई आफ्नो परिवारको भन्दा बढी चाहिएको थियो, र हामीलाई उसलाई पनि चाहिएको थियो। हामीले शक्तिहीन महसुस गर्यौं। हामी केवल हवाईजहाजमा हाम फाल्न र उसलाई समर्थन गर्न मेक्सिको उडान गर्न सकेनौं। हुनसक्छ हामी सक्दछौं, उहाँले कहिल्यै अनुमति दिनुहुने छैन।
मेरो बुबाको क्यान्सर २०१ 2016 मा क्रमिक रूपमा बिग्रँदै गयो। उसको प्रतिरक्षा यति कम छ कि चेमोले वास्तवमा उसलाई चोट पुर्‍याएको भन्दा उसलाई बढी मद्दत पुर्‍यायो। उहाँ टर्मिनली बिरामी हुनुभयो र हामीलाई हजारौं माईल टाढाबाट अहिलेसम्मको सबैभन्दा गाह्रो निर्णयको सामना गर्न हामीलाई छोड्नुभयो। मेरो कान्छो भाई बाहेक, म एक मात्र व्यक्ति हुँ जसले त्यहाँ उडानको लागि अग्रिम प्यारोल अनुरोध गर्न सक्थ्यो। दुर्भाग्यवस, मेरो DACA आवेदन त्यस समयमा ढिलाइ भएको थियो, र देश छोड्नु मेरो लागि उच्च जोखिम हुने थियो। हाम्रो वकिलले पुष्टि गरे कि यदि म तल उडेर गएँ भने मलाई फर्कन धेरै गाह्रो हुने थियो। यदि मेरो DACA स्थिति बिगार्नु पर्ने थियो भने, मेरो बुबाको बलिदान व्यर्थ भयो। हाम्रो अन्तिम दिनहरुमा उसलाई समर्थन गर्न मेरो भाई त्यहाँ उडान गर्न बाहेक हामीसँग कुनै विकल्प थिएन। मेरो बुबा मेरो भाई जत्तिकै चाँडो बित्नुभयो।
हरेक दिन, म मेरो बुबाको उपस्थिति महसुस गर्दछु। म निरन्तर उसले मलाई सिकाएका धेरै पाठहरूको सम्झनाहरू पछाडि खेल्छु। "Échale ganas mijo!", वा "No te rindas por lo que estés luchando।" उनी एक शहीद थिए जसले अवसरको भूमिमा हामीले रोजेको जीवन निर्माण गर्ने अवसर पाउनको लागि आफ्नो जीवन बलिदान गरे। मेरो बुबा एक वास्तविक सपना देख्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। उसको सम्झनाहरू मभित्र बाँचिरहेका छन् किनकि म उहाँको एक हिस्सा हुँ। म सपना देख्नेछु। म विकसित गर्न जारी छ। म मेरो बुबाको पैतृक सम्पन्न गर्न जारी राख्छु।
यो पोस्ट लेख्न र हामीसँग उनको अविश्वसनीय प्रेरणादायक कहानी साझा गर्नका लागि डेभिड सोटोलाई ठूलो धन्यवाद। डेभिड सोटो कम्युनिडाडेस ल्याटिनस युनिडास एन् सर्भिसियो (सीएलयूईएस) मा वित्तीय क्षमता प्रोग्राम सुपरवाइजर हो। डेभिडले Lending Circles कार्यक्रमहरू CLUES मा पनि निरीक्षण गर्दछ।